Impempe.com, Author at Impempe
UMotaung Junior ubonga uMdali ngesikhundla asinikwe kwiChiefs
July 1, 2021 July 1, 2021 Impempe.com
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Sithunyelwe UKaizer Motaung Junior, osanda kuqokwa njengeSporting Director kwiKaizer Chiefs, uthi uzizwa ehloniphekile kakhulu ngokunikwa lesi sikhundla eqenjini laseNaturena. UJunior, oyindodana kaKaizer Motaung, umenyezelwe njengeSporting Director ngoLwesine emini. Kuthiwa uzothatha lesi […]
Leave a commentEzakamuva, iDStv Premiership
AmaProteas ethubeni lokuqeda nya ngeWindies
July 1, 2021 Impempe.com
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Twitter INingizimu Afrika izoya emdlalweni wesine weT20 lapho izobhekana khona neWest Indies, inokuzethemba kulandela ukuwina umdlalo wesithathu. EzikaTemba Bavuma (ukaputeni) ziwine sekuvalwe amehlo ngoLwesibili, zishaya iWindies nge-run eyodwa vo. Lokhu kwenze […]
Leave a commentIkhilikithi
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Twitter Ukudlula emhlabeni kwenkakha ebholeni laseNingizimu Afrika, uCyril Kobus, kushiye abaningi abaphile naye ngezikhathi zeNational Soccer League (NSL) bephuke umoya. UKobus uke walidlala ibhola ngezikhathi zakudala ngaphambi kokuthi afake isandla ekuphathweni […]
ULetsholonyane akawuvali umlomo ngenkulisa yeChiefs
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Twitter UReneilwe “Yeye” Letsholonyane, owake wayibamba kwiKaizer Chiefs, uncoma leli qembu ngokuba nenkulisa evuthayo nekhiqiza abadlali abanekhono. Amakhosi abengavunyelwe ukusayinisa abadlali ngesizini edlule kodwa abadlali abafana noBruce Bvuma, Nkosingiphile Ngcobo, Njabulo […]
UMBONO UBHALWE: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Twitter Ngazi kahle ukuthi ababaningi abakholwa wukuthi iKaizer Chiefs ingawina iCAF Champions League ka-2021 njengoba lo mqhudelwano usifinyelele esigabeni semidlalo eyandulela owamanqamu. Bambalwa vele ababecabanga ukuthi Amakhosi angahamba ibanga elide […]